Magaalo dadkeedu hoosta ka guuxo laakiin aan ficil lahayn - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Magaalo dadkeedu hoosta ka guuxo laakiin aan ficil lahayn
Waxa magaalada Boorama cagafta la mariyay dhididka dad badan oo masaakiina dhulkooda iyo jagooyinkooda kadibna loo sheegay inayna ku soo noqon karin. Inkastoo culimada ruuxiga ah sida Sh Xasan Daheeye u sheegeen inay waajib tahay inay difaacdaan hantidooda haddana ilaa hadda ma jiro wax ficila guux hoose mooyee.
Haddaba maxay tahay hoos ka oohintu mar hadaanad difaacanayn hantidaada?
Mashruucan caydhinta ee Boorama laga bilaabay ayaa sidii caadiga ahayd loo sheegay inay yihiin dad ilbaxa oo jecel horumarka, waxayse ku qaldameen oo ayna marnaba is weydiin ma helayaa kharashkii iga galay dhulkeygan cagafta la mariayo.
”Naqshadeyn cidna ma diidana laakiin diiniyan qof markaad hantidiisa burburinayso waa inaad magtiisa siisaa inta aanad taaban laakiin maamulka magaalada Boorama oo caydhintan masuul ka ah ayaan haba yaraate wax aqoona u lahayn arimaha noocana waana iyaga kuwa iska hor keenaya dadka ayuu qabaa Xuseen Warsame.
”Gudoomiyaha cusub ee degmada ayuu ahaa ninkii dalbaday naqshadeynta magaalada waxana lacag farabadan looga cunay qalab aaan tayo lahayn, kaaga daran haba yaraatee wax wacyi gelina iyo tafaasiila kama bixin sida loo fulinayo qorshaha, waxa keliya oo lagu baraarugey cagafeyntahantuida dadka ayuu yiri Xuseen Warsame.
”Maamulka ISAAQ waxba laguma eedayn karo ee dadku hantidooda waxay ku leeyihiin gudoomiyaha degmada Baradho oo isagu masuul ka ah qorshahan markii horeba ayuu yiri Xirsi Warfaa. ”Keliya wuxuu ku celceliyaa in dadku soo dhaweeyay tasas oo been noqotey.
Waxa dhinaca kale soo baxday in guriag laga dudumiyay fanaanada Safiyo Tusmo ay k ahoreeyeen guryo kale oo wadadu maraysay laakiin aan la mariun cagafta taas oo dadka qaarkood u qaateen in iyada si gaara loo beegsaday.
”Fiiri wadadan waxay ku socotey deyrkan iyo ilaa guryaha laakiin halkan ayaa lagu joojiyay halka gurigayga oo wadadu hortiisa ku dhamaanaysay cagafta la mariayay ayay tiri Safiyo Tusmo.
Isku soo duuboo caydhaynta uu ku kacay gdoomiye Baradho oo si aada uga daray kii ka horeeyay isaga ee Caseeye wuxuu isagu kula baxay magac cusub oo ah Caydhiye ayuu yiri Xirsi Warfaa.
Caydhinta magaalada uma malaynayo in sidaa looga tagayo ayuu qaab Xuseen Warsame. ”Maxay naqshadeyn faaiido u leedahay in qof hantidiisa uu waayo faaiido male horumarna ma keenayso marka dooda ah magaaladaan idiin naqshadeyn adoon abuurin shaqo intii jirteyna uytaha raaciaya waa weerar cad oo lagu soo qaaday shacabka gobolka oo markii horeba ku jirey go’doon ayuu raaciyay Xuseen Warsame.